Imagnetic iyaphikisana kunye nomatshini wokushicilela uMvelisi kunye noMboneleli
Ikhaya / Umshini wokuGaya iMagnetic / Umatshini wokuphazanyiswa kweMagnetic kunye nomatshini wokucoca
Umshini wokutshitshiswa kweMagnetic kunye nokupenda
Udidi: Umshini wokuGaya iMagnetic tags: umatshini ophazamisayo wokuphamba, Oomatshini bokushicilela ombane, Imagnethi ekhukulisa umbane, izixhobo zokugaya zombane, umatshini wokugaya, umatshini wokushicilela wombane
Umgaqo-nkqubo weMagnur deburring kunye nomatshini wokucoca
Oomatshini bokugaya iMagnetic (umatshini wokutsala amandla kunye nomatshini wokucoca) sebenzisa amandla omlingo wensimu yamagnetic ukwenza iipinki zensimbi ezingenasici zijikeleze ngokukhawuleza, kwaye izikhonkwane zika-burr, ziphola kwaye zihlambulule iziqwenga zomsebenzi ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Lo matshini akenzi nantlungu engqongileyo xa isebenza.
Umatshini wokugaya iMagnetic (ukutsala umatshini wokutsala kunye nomatshini wokucoca) Ukucaciswa
The Umatshini wokugaya umazibuthe (umatshini wokuhlaziya kunye nomatshini wokucoca) I-SUPER enkulu yokugaya igumbi eliyilwe, elungele ukukhululaukugaya, ukuphosa okanye ukucoca. I umatshini wokugaya eqhuba ngokuzenzekelayo, umntu omnye unokusebenzisa oomatshini abaninzi.
Oomatshini bokugaya iMagnetic (umatshini wokutsala amandla kunye nomatshini wokucoca) sebenzisa amandla omlingo wensimu yamaginti ukwenza iipinki zensimbi ezingenasici zijikeleze ngokukhawuleza, zi-de-burr, ziphole kwaye zicocwe iziqwenga zomsebenzi ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Oomatshini bokugaya abemagnethi (ukutsala umazibuthe kunye nomatshini wokucoca) ubume bendalo, akukho ukungcola. Bazi ukugayakunye nokuphosa ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo. Banobuchule obuhle bokugqithisa ngokukhawuleza, ngokukhawuleza ukugaya izimbobo ezincinci zangaphakathi, iipayipi zangaphakathi, izixhobo, njl. Yenza akukho monakalo ebusweni bomsebenzi, kwaye UNGAKHINTSHI ukuchaneka kwemisebenzi.
Oomatshini bokugaya zisebenza ngokulula, ezikhuselekileyo nezifanelekileyo, iindleko eziphantsi kunye nokusebenza ixesha elide.
Imveliso yethu matshini ezifanelekileyo ukugaya, ukucima, ukuxubusha kunye nokuphosa zonke iintlobo zetsimbi zokumathintela zetsimbi, ukubethelwa kwesimbi, iplastiki eqinile, njl njl matshini Zifakwa kumashishini e-horologe, i-eyeglass, imveliso yokutshixa, izihombiso kunye nobucwebe, i-electron, i-artware, oomatshini kunye nezixhobo zekhompyutha, njl.
Ubucwebe, ubugcisa bezandla, ingqokelela, izixhobo ezizenzekelayo ziyinxalenye, ukusasaza, ukubetha izixhobo zomatshini, intwasahlobo kunye ne-shrapnel spare parts, i-elektroniki, ezomnxeba, izixhobo zonyango.
I-1.Ilungele ukukhanya kwesinyithi sensimbi, isinyithi esingesosinyithi kunye neenxalenye ezinzima zeplactic.
2.Realizing multi-effec ezifana burr wlimination, engile umva,ukuphosa nokucoca, njalo njalo
3.ipolishi I-engile efileyo yezahlulo ezingaqhelekanga,
Ixesha le-4.blending, isantya esiphezulu, ukusebenza ngokulula nangokukhuselekileyo
5.Adjustable uyakwazi ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno ipolishi
6.Akukho angle ifileyo ngelixa ipolishi
7.Ukugqiba ukukhumbuza, kunokukhumbuza xa kwenziwe ipolishi, umntu unokulawula uninzi
I-8.Volage, yangoku, imvama kunye nexesha zilawulwa kalula
9.ipolishi Inkqubo ayifuni kungenelela
Umatshini wokugaya iMagnetic (umatshini wokutsala amandla kunye nomatshini wokucoca) kususa uluhlu olugqithisiweyo okanye ukutshisa iindawo zeendawo, uhlawule kwaye uqedqe amalungu ngexesha elifutshane kakhulu. Umatshini ubaluleke kakhulu kwiindawo ezinemingxuma yangaphakathi, iimoko eziyinkimbinkimbi, izixhobo okanye iintambo. Umshini wokugcoba umbane awuyi kubuhlungu ububanzi beendawo, kwaye ungatshintshi ukuchaneka kweendawo emva kokugqiba. Umatshini usebenza ngokufanelekileyo kwaye kuphela malunga ne-5 ~ 20 imizuzu efunekayo kwiindawo. Umatshini wokugaya iMagnetic (umatshini wokutsala amandla kunye nomatshini wokucoca) Unako ukugqiba izinto zetsimbi kunye neeplastiki ezinzima.